မျှော်လင့် နေဆဲဘဲ: June 2010
BURMA'S JUNTA LIED TO THE IAEA
IAEA to investigate Burma's nuclear program
Updated June 30, 2010 20:43:24
It's beenarumour for years but now the international nuclear watchdog has formally turned its attention to Burma. The International Atomic Energy Agency is understood to be investigatingareport, written by one of its own former directors. The document draws onanew dossier of material which was smuggled out of Burma, byaBurmese weapons expert. The IAEA has approached the Burmese regime asking it to explain why it appears to be manufacturing parts for nuclear weapons.
Presenter: Jeff Waters
Speakers: Robert Kelly, former director of the International Atomic Energy Agency
မြန်မာစစ်တပ်က ၁၉၆၂ မတ်လ ၂ ရက်နေ့ ကထဲက လိမ်လာတာ
အမှန်တရား အတွက် ဘုရားသခင် ရှိပါတယ် ၊
PROOF: BURMA'S MILITARY JUNTA LIED TO THE IAEA
The Democratic Voice of Burma has published photos and other documentation
from their source, Sai Thein Win, about the SPDC's nuclear ambitions.
Former IAEA Director Robert Kelley has examined this evidence and
concluded that the ruling generals have “a clandestine nuclear program.”
Mr. Kelley also graciously noted that the new evidence confirms what
groups such as Dictator Watch have previously revealed, albeit without
After being asked by the IAEA on June 14th to explain itself, the SPDC
responded on June 19th that it did not have suchaprogram:
“... the allegations made by the international media against Myanmar
regarding the nuclear programme are groundless and unfounded; that no
activity related to uranium conversion, enrichment, reactor construction
or operation has been carried out in the past, is ongoing or is planned
for the future in Myanmar...”
Dictator Watch is now inaposition to prove that this isabald-faced
lie. We have secured hard evidence that confirms, and fromacompletely
different direction, that the SPDC has nuclear designs. Evidence of this
has actually been piling up for years, but our new documentation makes it
We have obtained lists of the 660 students who constitute 2009's Batch 9
of the SPDC's
State Scholar Program to Russia, and who are enrolled atatotal of 14
different universities; as well asalist of 50 more students, we suspect
from Batch 8, at one of the universities.
The lists give each student's name, passport number (for one institute we
even have images of their passport ID page), rank in the Burma Army (for
many), area of study, and, most importantly, the SPDC project for which
they are being trained and their detailed educational specialties. From
Batch 9, 111 of the students, or 17%, are assigned to the "Nuclear"
project. Some individuals assigned to other projects also have nuclear
We have previously published information that the total State Scholar
population, since its inception in 2001 (when Burma reached an agreement
to purchaseanuclear reactor from Russia), is as high as 5,000 people.
The figure for Batch9makes this estimate appear completely reasonable.
Without doubt, hundreds and hundreds of people have been trained since
2001 for the Nuclear Project.
Some of the identified specialties are also quite revealing:
- Production of uranium
- Purification of uranium
- Nuclear power plant and installation
- Nuclear reactor control system
- Spent fuel reprocessing
Underaproject called HRD, we find production of uranium metals, and
zirconium cladding for enriched uranium fuel; under Computer Control, data
processing in nuclear experiments; and under Rocket, fabrication of
uranium plutonium mixed nitride.
While no one is openly being trained in “bomb-making,” the skills being
taught in Russia would certainly prepare some of the students for the
basics of atomic weapons manufacture. Also, as we have previously
reported,asmaller group of Burmese students has studied in North Korea.
We have further learned that teams of North Korean and Chinese experts are
now in Burma, although their precise activities are unclear: The Chinese
technicians may be working on conventional heavy weapons, not nuclear.
An open question is where all of the nuclear specialists are being
employed. Suchalarge group implies that there are many different
facilities in operation. It also likely means that the Nuclear Project is
broader than what seems apparent from the documentation of Sai Thein Win.
There clearly remainsalot of investigation to do.
Indeed, we believeaclose review of the lists will enlighten technically
informed readers of many elements of the SPDC's overall military
modernization program. If you know the general projects, and the specific
areas of study, you should be able to deduce much about what is planned if
not already underway.
The projects listed include: Nuclear, HRD, Rocket, Tunnel, various
computer including Super Computer, Aero, Air Base, Navy Base, Hydro,
Geology, Road and Bridge, and Medical.
In light of all of this, it is an outright lie for the SPDC to say that it
does not haveanuclear program. The IAEA and the International Community
should reject the junta's statement and instead pursue the most vigorous
steps to unveil, and counteract, its efforts to develop or otherwise
obtain atomic weapons.
Moscow State Pedagogical University passports
Moscow Institute of Aviation Technology
http://www.dictatorwatch.org/images/MSMU.pdfMendeleev University of Chemical Technology
Moscow State University of Technology – Stankin
Moscow Institute of Electronic Technology - suspected Batch 8
Posted by Mr Htay Tint at 3:57 PM0comments
G8 Muskoka Declaration 2010
ကနေဒါနိုင်ငံ တိုရွန်တို့ မြို့ မှာ ကျင်းပ ပြီးသွားခဲ့ တဲ့ 
ကမ္ဘာ့ အကြိးဆုံး ၈ နိုင်ငံက အကြီးဆုံး ခေါင်းဆောင်
ကြီးတွေ ဆွေနွေးကြတဲ့ အထဲ မှာ မြန်မာ့ အရေး ကိစ္စ
ပါဝင် ပြီး အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်
ကြော်ငြာချက် လက်မတ်ရေးထိုး ထုတ်ပြန် နိုင်ခဲ့ ကြပါတယ် ...
မြန်မာ အရေး ကို နိုင်ငံကြီးအားလုံးက
အရေး ပေး လျှက် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများကို
အားပေး ထောက်ခံလျှက် ပါ...
27. We, the Leaders of the G8, remain deeply concerned about serious threats to global peace and security.
We are all affected by threats from the proliferation of weapons of mass destruction,
terrorism, international organized crime (including drug trafficking),
piracy and from political and ethnic conflict. Prosperity, development and
security are inextricably linked,
and the economic well being and
security of our own countries and those around the world are therefore interdependent.
We shareavision ofapeaceful world,
based on the principles of freedom, democracy,
respect for human rights and the rule of law,
and remain ready to continue to work on this basis in partnership
with each other and other concerned countries to address security challenges that affect us all. ……………………....................................................
40. We urge the Government of Myanmar
to take the steps necessary to allow for free and fair elections.
Full and inclusive democratic participation is essential to this.
We urge the Government to release without delay all political prisoners,
including Aung San Suu Kyi, and
engage the democratic opposition and representatives of ethnic groups
inasubstantive dialogue on the way forward to national reconciliation. ...........................................................
In addition, Canada's Foreign Minister mentioned the concern on relationship Burma
and North Korea in his June 18th speech in toronto about "G8 Today"
This agenda reflects the reality that the global threat posed by the potential use of nuclear weapons
by state and non-state actors remains very real. ......................................................................................................................
Speaking at the Non-Proliferation Treaty Review Conference [2010 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons] recently in New York, I called on North Korea to return to the Six-Party Talks, to dismantle its nuclear weapons program inacomplete, verifiable and irreversible manner, and to accept comprehensive international safeguards for its nuclear programs.
North Korea may be working to export its nuclear technology to another country withadeplorable human rights record, Burma,acountry against which we have implemented very stringent sanctions.
(G8 Summit, Foreign Afafirs Ministry)
In Canada and the U.S., please call 1-877-328-9968;
outside North America,
please call 416-607-2369.
You can also email mediaG82010@international.gc.ca.
စာဖတ်သော မြန်မာများ အတွက်
နအဖကို ထောက်တိုင် အဖြစ် သွယ်ဝှိုက်ထောက်ပံ့နေသော
ပြည်တွင်း ဖွံ့ ဖြိုးရေး စီမံကိန်းများ အပါအဝင်
နအဖနှင့် ပြည်တွင်း ထုတ်ကုန် ဝယ်ယူမှုများကို ရေရှည်ချုပ်ဆိုမည့် အစား
နှစ်စဉ် ရေတို စာချုပ်များ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ ကြရန် ဝိုင်းဝန်းဖိအားပေးရန် ။
လင်မာန်တက်သည့်မိန်းမများကဲ့သို့ 
အာဏာကို သေသည်အထိ ပြည်ပ စီမံကိန်းများကို
ဗိုက်ဖေါင်းအောင် ဝါးပြီး ပြည်သူများကို နားရိုင်းအောင် ကြွားနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် ။
Posted by Mr Htay Tint at 10:23 AM0comments
Registration Law English
တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးရေး တပ်မတော်မှ ဗိုလ်ချုပ်တစု ကာကွယ်ရေးနဲ့ 
ထမိန်ဝတ်ကို ကြောက်တဲ့ တပ်မတော်
Power is come from GUN. Not for people.
Union Election Commission Law English
စစ်တပ်က တရားဝင် အာဏာသိမ်းပိုင်ခွင့်နဲ့ 
ယုံကြည်ချက်အတွက် အကျဉ်းကျနေသော နိုင်ငံရေးသမားများမပါတဲ့
စစ်တပ်နေရာလုပွဲ ကိုရွေးကောက်ပွဲ ခေါင်းစဉ်တတ်တာသိစေချင်လို့ ပါ
1. Union Election Commission Law English
Jin Webb Kills Burmese People 2
This picture idea from inside people from Myanmar.
We would like to tell world people feeling of Burma.
Real MYANMAR today
Well come to read this page.
If you want to more or contect
of write down in comments
View BLC Analysis on Elections 2010
BLC Analysis on Elections 2010
View Analysis on SPDC's 2008 Constitution
Analysis on SPDC's 2008 Constitution
Legal Analysis on Abolishing of the Union Election Commission Law and Commission
Posted by Mr Htay Tint at 1:18 PM0comments
Secret Nuclear video အနုမြူဗုံးလား
ဗုံး ဗုံး ဗုံး ဆိုအော်နေကြတာ
ဘယ်သူခွဲခွဲ မကောင်းပါဘူး ကောင်းပါတယ်အော်နေကြတာ ။
မြန်မာပြည်တွင်းရေးပါ ။ ပြည်တွင်းရေးဝင်မစွက်ပါနဲ
မိုင် ၁၈၀၀ ကျော်ကို အနှောက်အရှက်မရှိဘဲ အနုမြူဗုံးကြီး ပျံရန် နှစ်အနည်းသာလိုတော့သည် ။
မြန်မာပြည်မှ မိုင် ၁၈၀၀ အတွင်းမှ လူသန်းပေါင်းများစွာကို စက္ကန့် ပိုင်းအတွင်း
စတဲ့ အရာတွေမကြာခင်ဖြစ်တော့မည် ။
သိမ်းပိုက်ရန် ဗုံး ဗုံး
အီရန်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာက ဝိုင်းကိုက်သလိုဘဲ ၊
အီရတ်ကိုတော့ အမေရိကန်က ဝင်သိမ်းလိုက်တယ် ။
အာကဖန်နစ္စတန်ကြတော့ အကြမ်းဖက်မွေးရာဒေသဆို ထိမ်းချုပ်နေတယ်
ခရူးဆိတ်စစ်ပွဲ အငွေ့ တွေကို စစ်အေးကာလတွေမှာ ကာကွယ်ကြသလို
မြန်မာပြည်ကိုလည်း ကာကွယ်ကြရင်ကောင်းမယ် ။
တရုပ်ပြည်က ကွန်မြူနစ် ပစ္စည်းမဲ့ကို အခြေခံပြီး
အပြောကောင်းပြီး မိုက်တဲ့ သူတွေ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်တဲ့ ၊
မြောက်ကိုရီးယားလည်း ဝါဒတခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ကိုင်ထားတာဘဲ ။
မြန်မာပြည်က အဂ်လိပ်လွတ်မြောက်ရေးကထဲက ဝါတွေတိုက်ပွဲဖြစ်တာ
စစ်ဗိုလ်တွေ ကြားကစားသွားတယ် ။
အခုလည်း ဘာဝါဒမှ မရှိတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေ
ကိုသီဟရေ ခြသေ့ကြီးအဖွဲ့ တို့ ရေ
အားမတန်လို့ မာန်လျှော့နေတာ ။
Posted by Mr Htay Tint at 12:33 PM0comments
၁၉၈၉ ခုနှစ် ကျောင်းသားတပ်မတော် ဗဟိုရုံးခန်းသို့တောတွင်း တပ်ရင်း၂၀၆ ကျောင်းသားစခန်းမှ
ကိုယ်စားလှယ်များ ရောက်လာကြပါသည် ။
အသားညိုညို အသံပြာပြာ မေးရိုးကျယ်ကျယ်နဲ့လူငယ်တဦးက ဦးဆောင်လာပါသည် ။
ဗဟိုဌာနချူပ် ရှိတာဝန်ရှိ သူများကို တောတွင်းစခန်းရှိ တပ်ဖွဲ့ ဝင်များ၏ အခက်အခဲနှင့်
လိုအပ်ချက်များကို အသေးစိတ်တင်ပြ တောင်းဆိုပါသည် ။
အဲဒီကာလတုံးက စခန်းတွင် ကျန်ခဲ့သောကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ ဝင်တိုင်း မိုးလင်းတာနှင့် ငရုပ်သီးရှာရပါတယ် ။
ရလာသော ရိုက္ခာထဲမှာ ကုလားပဲနဲနဲ သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်နေတတ်ပြီး ။
ဝက်စာကျွေးလျှင် ထဲ့သော ဈေးအပေါဆုံးငပိသည် လက်မြန်သူသာ စားရတတ်ပါသည် ။
အသုဘ အသံကို နားထောင်တတ်သည်မှာ အကျင့်ဖြစ်နေတယ် ။
အသားတုံးဆိုတာ အဲဒီအခါမှ မြင်ရတာကိုး ။
ကှန်တဲ့အချိန်ကတော့ပုတ်သင်ညိုတို့ကင်းလိပ်ရှောတ်ို့ဖါးပြုတ်တို့ ပေါ့ဗျာ ။
ဆပ်ပြာမရှိဘဲ သောင်ရင်းမြစ်ထဲ ရေချိုးကာ အဝတ်ဟောင်းများကို
သောင်ရင်းရေထဲနှစ်ပြီး ပြန်မတင် လိုက်လျှင် လျှော်ပြီးပါပြီ။
ညနေစောင်းခါနီးတွင် ထင်းချောက်များ ကောက်စုထားကြပြီး နေဝင်စပြုသည်နှင့် မီးမွေးကြရပါသည် ။
မီးဖိုရန်လည်း မြေကျင်းကို ကျကျနနတူးထားရပါတယ် ။
တူးရသည့်နေရာသည် မိမိ စက်တော်ခေါ်မည့် ဝါးစင်အောက် တည့်တည့်တွင်ဖြစ်ပါသည် ။
အေးခြမ်းသော တောင်ပေါ်အတွက် အနွေးထည် စောင်ဆိုသည်မှာ
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းသားတပ်ဖွဲ့ ဝင်များအဖို့ လိုချင်ရင် မြေကြီးပေါ် ပုံဆွဲမှ ရပါတယ် ။
ဈေးအပေါဆုံးငပိသည် နေ့ တိုင်းစားသောက်ရန် မသင့်လျှော်သည့် အခြေအနေမှာ ခြင်ထောင်ဆိုသည်မှာလည်း စစ်ပတ်တီးများကို စပ်ချူပ်မှ ရမည့်အနေအထားပါ ။
နယ်စပ်မှ ငှက်ဖျားပိုးသယ်ဆောင်ထားသော ခြင်များသည်
သဘာဝ သစ်ဥသစ်ဖု သစ်သီးများကြောင့် အမတန် ထွားကြိုင်းသန်စွမ်းကြပါတယ် ။
ညနေရောက်လို့ မှောင်စပြုသည်နှင့် အစာရှာထွက်သော အသံသည် ဒီဝီဇံ တပ်ထွက်သံ လိုလို ဆိုင်ကယ်အုပ်လိုက်မောင်းသံလိုလိုကြားရပါတယ် ။
အသားဓါတ် ငတ်ကြီးကျနေသော ဒီဝီဇံခြင်တပ်မကြီး အဖို့ 
ကျောင်းသားတပ်မတော်ရှိ လူအသွေးအသားများ ဟာ မက်မောဘွယ် အစာအဟာရများဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဝီကနဲ အသံကြားလိုက်ပြီး ဖေါက်ကနဲ ကလေးတယောက်က
လောက်လေးနဲ့ အပ်ထဲ့ ပြီး ပစ်လိုက်သလို ခံစားလိုက်ရလျှင် သေချာတာက ခြင်ကိုက်ခံရပါပြီ ။
ပင်အပ်နဲ့ ထိုးသလိုပါဘဲလေ ။
အဲဒီ ခြင်ကြီးတွေ ကြောက်တာက မွန်ထူနေတဲ့ မီးခိုးတွေပါ ။
အိပ်ရာအောက်မှာ မီးဖိုပြီး မီးခိုးများများ ထွက်အောင် မကြာခဏလုပ်ပြီး မီးစကို ငြိမ်းပေးရပါတယ် ။
ကြာတောလဲ အကျင့်ဖြစ်လာပါတယ် ။ မီးခိုးများလေလေ အိပ်ကောင်းလေလေပါဘဲ ။
သံမဏိ ဖလန်မီးကိုတိုးတဲ့ မီးသတ်သမား သင်တန်းထဲက လေ့ကျင့်ခဏ်းတွေဟာ ကလေးအဆင့်ပါဘဲ ။
အသက်ငယ်တုံးကတော့ မသိသာပါဘူး ။ အဆုပ်ကတဆင့် အခြားအစိပ်အပိုင်းတွေ ပျက်စီးပါတယ် ။
ဦးနှောက်ကို ထုံထိုင်းလေးလန်တဲ့ မီးခိုးဒဏ်တွေနဲ့ အိပ်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်ကုန်တာကြောင့်
အရက်တွေ အလွန်အကျွံ သောက်တတ်တာ မဆန်းပါဘူးလေ။
အသဲတွေ ပျက်စီးပြီး အပ်နဲ့ စုပ်ထုတ်တဲ့ အဆင့်တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ ။
အရွယ်ကောင်း အသက် ၄၀ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တော်လှန်ရေးကို
အပြီးအပိုင် တပ်ဖွဲ့ ဝင်အဖြစ်ကတောင် နှတ်ထွက်ပေးလိုက်ကြရတယ် ။
ရင်ထဲမှာ တင်းတင်းကြီး နာကျင်စေတာပါ ။
တော်လှန်ရေးနယ်မြေ တုံးက အသက်က ငယ်သေးတော့
သတိမထားမိတာတွေကြောင့် မိမိခန္တာကိုယ်ဟာ သာမာန်လူတွေထက်
ကြံ့့ခိုင်မှုအားနဲ နေတာကို ဒီနေရာက သတိပေးလိုပါတယ် ။
တော်လှန်ရေးနယ်မြေက ကျားကုတ် ကျားခဲ တိုက်ပွဲ ဝင်ခဲ့ဘူးသူ
ညီအကို မောင်နှမ များ မိမိကျန်းမာရေးကို ပြန်လည် စစ်ဆေးလိုပါတယ် ။
နယ်စပ်မှာ ရပ်တည်လို့ မရတဲ့ အဆုံး တတိယနိုင်ငံမှာ မဖြစ်မနေ ပြောင်းခဲ့ကြရတာမို့ 
ဆက်လက်ပြီး တိုက်ပွဲ ဝင်နိူင်ရန် မိမိတို့ ကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ကြပါ။
မြန်မာပြည်က မိမိကိုယ်ကျိုး ကျန်းမာရေးအတွက်အဖွဲ့ အစည်းထောက်ခံချက် လိမ်ယူခဲ့သူတွေ ။
စီးပွားရေးအတွက် ပြည်ပမှာ အခြေချသူများကတော့ ဒီကိစ္စကို အလွန်တန်ဖိုးထားကြပါတယ် ။
၁၉၈၈ ကလူငယ်တွေ တော်လှန်ရေးကို အသက်ဆုံးသည် အထိလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
လုပ်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကိုသန်းနိူင် ပြောခဲတဲ့ စကားကောင်းတခု အမြဲကြားပြီး အမှတ်တရကတော့
ကျွန်တော်က အောက်ခြေက လူငယ်ခေါင်းခေါင်းဆောင်ပါ ။
အပေါ်ကိုတက်ပြီး တာဝန်ယူဖို့အာဏာလုဖို့ အခြေအနေမရှိပါဘူး ။
မှန်ကန်တဲ့ ဦးဆောင်မှု အောက်မှာ လိုက်နာပြီး ပူးပေါင်းရန် အမြဲအသင့်ပါဘဲ
ကိုသန်းနိုင် ၁၉၈၉ ကာလ တောတွင်းက ၂၀၆ တက်ရင်း ရုံးရှေ့ မှာ မီးလှုံရင်းပြောခဲ့ဖူးတာပါ ။
နောက် တောထဲမှာနေလို့ မရတော့ ဘန်ကောက် ကနေပြီး အမေရိကန်ရောက်တဲ့အထိပါဘဲ ။
သူပြောခဲ့တဲ့ ကတိ စကားတလုံးကို အနှစ်၂၀ လုံးလုံး လိုက်နာ ကျင့်သုံးနေတယ်
တိုင်းပြည်အတွက် ဆက်လုပ်ကြမယ် လူထုကို ကူညီမယ်
လို့၂၀၀၉ မှာ ပြန်အဆက်အသွယ်ရတော့ 
ကျွန်တော့ကို အမောဖေါက်သည့်ကြားက ရီရီမောမောနဲ့ ပြန်ပြောပြပါတယ် ။
၁၉၈၈ ဒီမိုကရေစီ တောင်းဆိုမှု တိုက်ပွဲကစတင်ပြီး ၂၀၁၀ အထိ မြန်မာပြည် လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် လူငယ်ခေါင်းဆောင် တဦးအဖြစ် တာဝန်ကျေခဲ့သော မိတ်ဆွေကြီး သန်းနိူင်ကို ဒီဆောင်းပါးဖြင့် မှတ်တမ်းတင် ဂုဏ်ပြုပါသည် ။
၂ မေလ ၂၀၁၀
အို...မ.က.ဒ.တ တော်လှန်သောရဲဘော်အပေါင်းတို့ 
အသင်တို့ သည် ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ သော ထမင်းတပွဲကို
မင်းသမီး၊ မိုးတောင် စခန်းရဲ့ 
ကျွန်တော် သန်းဥိးစီုး(မိုးတောင်စခန်း ရင်း(၂၀၃)ကပါ။
၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာ ရဲဘော်ကြီးသန်းနိုင် ကိုခွဲခွါလိုက်ရတာပေါ့။
သော၊ပွင့်လင်းရိုးသားသော၊ဘ၀ပေးကြောင့်အရက်ကိုကြိုက်တတ်သော၊...........သော၊..........သော၊ သောများစွာနဲ့ သွာလေသူကိုသန်းနိုင် လွတ်လပ်မှမဟုတ်ပါ၊
ရင်နင့်စွာဖြင့် ကျုပ်ပြုသမျှ ကုသိုလ်အပေါင်း ကိုသန်းနိုင်ရပါစေကြောင်း အမျှဝေခေါင်းလောင်း ထိုက်ပါတယ်။ကိုသန်းနိုင်ကောင်းသုဂတိလားပါစေ၊
သူ့ (ကိုသန်းနိုင်)အကြောင်း၊ရေးစရာစာကြောင်းတွေအများကြီးကျန်နေပါသေးတယ်၊သူရည်မှန်းတဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပန်းတိုင်ဆီကိုလည်းကျုပ်တို့ ချီတက်စရာကျန်ပါသေး
တယ်။သူ့ နဲ့ ဓါတ်ပုံတချို့နောက်တော့မှပို့ ပါအုံးမယ်(မည်)
Posted by Mr Htay Tint at 8:41 AM0comments